Dhalinta Canfarta oo Kacdoono Bilaabay & Xaalka oo Qasan. | ogaden24
Dhalinta Canfarta oo Kacdoono Bilaabay & Xaalka oo Qasan.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Samara ee xarunta Gobolka Canfarta ayaa sheegaya kacdoono shacab oo kasocda dhulka Canfarta, kaas oo lafilayo in uu kufido guud ahaan Gobolka Canfarta ee gacanta gumaysiga kujira.
Sida xogta aan kuhelayno dhalinyaro udhalatay qoomiyada Canfarta oo kudhaqan magaalada Samara ayaa bilaabay ol-ole xoogan oo ay kaga soo horjeedaan maamul kusheega wayaanaha u adeega ee dhulka Canfarta kajira iyo guud ahaan cadaalad darada kajirta wadanka gumaysiga Itoobiya.
Dhalintan oo aad u’abaabulan ayaa lasheegayaa in ay bilaabeen ficilo kadhan ah maamulkusheega taliska wayaanaha wakiilka uga ah Gobolka Canfarta, waxaana lagu soo waramayaa in ay dhalintu qorshaynayaa kacdoono waawayn oo ay meesha kaga saarayaan maamul kusheega wayaanaha u adeega.
Dhalinta kacdoonka wada ayaa lasheegayaa in ay magaalooyinka waawayn ee dhulka Canfarta kudaadiyeen waraaqo uu kuqoran yahay qorshaha ay u howl galayaan iyo waliba erayo digniin ah oo kusocda maamulka xukuumada wayaanaha u adeega ee fadhigoodu yahay magaalada Samara.
Dhinaca kale ciidanka wayaanaha iyo maleeshiyaadka Canfarta ah ee lashaqeeya ayaa beegsi xoogan kuhaya dhalinta kudhaqan Gobolka Canfarta, waxaana lasoo tabinayaa dhalinyaro badan oo xabsiyada ladhigay isla markaana aad loojidh dilay.
Kacdoonada caynkan oo kale ah ayaa sanadkii 2015 kii kabilowday Gobolka Oromia iyagoo kufiday dhulka Axmaarada iyo qaybo kale oo wadanka gumaysiga ah, waxayna kacdoon wadayaashu gaadheen guulo badan iyagoo badalay xukuumadii xiligaas jirtay ee wayaanaha.